A tọhapụrụ CentOS 8.3 na onye guzobere CentOS amalitela mmepe nke Rocky Linux | Site na Linux
A tọhapụrụ CentOS 8.3 na onye guzobere CentOS amalitela mmepe nke Rocky Linux
Ọchịchịrị | | Nkesa, Noticias
Mwepụta nke ọhụrụ version nke CentOS 8.3 (2011) nke abata na-etinye mgbanwe site na Red Hat Enterprise Linux 8.3 na ihe yiri ya na onye guzobere CentOS, Gregory Kurtzer, mara ọkwa na ọ na-arụ ọrụ na mmepe nke ọhụrụ nkesa dabeere na RHEL, nke a na-akpọ Linux Rocky.
Ntughari ohuru nke CentOS 2011 dakọtara na RHEL 8.3, mgbanwe gbanwere na nchịkọta, dịka iwu, gbadata iji rebrand na ngbanwe nka.
1 Banyere CentOS 8.3 (2011)
2 Nweta CentOS 8.3
2.1 Onye guzobere CentOS bidoro mmepe ụlọ RHEL ọhụrụ
Banyere CentOS 8.3 (2011)
Na mgbakwunye na atụmatụ ọhụrụ ewepụtara na RHEL 8.3, ọdịnaya A gbanwere nchịkọta 34 na CentOS 2011gụnyere anaconda, dhcp, Firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit na yum.
Mgbanwe na nchịkọta na-ejikarị njedebe na rebranding na nnọchi nke ihe eserese. Ehichapụwo ngwugwu ụfọdụ RHEL dịka redhat- *, ndị ahịa nghọta, na ndenye aha-njikwa-Mbugharị *.
Na usoro nkewa mbipụta nọgidere emelitere nkesa CentOS Stream sitere na CentOS Linux, emebere ngwugwu mmeghe na Septemba usoro dị iche iche maka CentOS Stream, qnke mere ka o kwe omume ikewapụta ọdịdị ọdịdị.
N'ịga n'ihu n'ọrụ a, iji mee ka mbugharị site na CentOS Linux na CentOS Stream dị mfe, e mere mgbanwe na faịlụ nchekwa ma gbanwere ihe nchọpụta nchekwa.
Mgbanwe nkwụnye ego na-elekwasị anya na ijikọ aha nchekwa na ibelata ha (dịka ọmụmaatụ, a gbanwere aha "AppStream" ka ọ bụrụ "appstream").
Iji gbanwee gaa na CentOS Stream, ugbu a o zuru ezu ịgbanwe aha ụfọdụ faịlụ dị na ndekọ ndekọ /etc/yum.repos.d, melite nkwụghachi ma mezie ojiji nke ọkọlọtọ "–enablerepo" na "-disablerepo" na gị ederede.
Mgbe, na akụkụ nke nsogbu ndị a maara:
Mgbe ị wụnye na VirtualBox, họrọ ọnọdụ "Server with GUI" ma jiri ya
VirtualBox abụghị tupu 6.1, 6.0.14 ma ọ bụ 5.2.34;
RHEL 8 kwụsịrị nkwado maka ụfọdụ ngwaọrụ ngwaike nke ka nwere ike ịdị mkpa. Ihe ngwọta nwere ike ịbụ iji kernel centosplus na foto iso nke ndị ọrụ ELRepo kwadebere ya na ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ;
Usoro akpaka maka ịgbakwunye AppStream-Repo anaghị arụ ọrụ mgbe ị na-eji boot.iso na ịwụnye NFS;
Ngwugwu enweghị ike ịkọwapụta mgbanwe mpaghara DNF / YUM
Nweta CentOS 8.3
Ejiri ihe oyiyi CentOS 2011 kwadebe na onyonyo 8GB DVD na 605MB netboot maka x86_64, Aarch64 (ARM64) na ppc64le architectures.
Ihe nchịkọta SRPMS nke e ji wuo ọnụọgụ abụọ na debuginfo dị na vault.centos.org.
Onye guzobere CentOS bidoro mmepe ụlọ RHEL ọhụrụ
N'aka nke ọzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite nke CentOS 8.3, onye guzobere nkesa ahụ, Gregory Kurtzer, kwupụtara na n'ihi mkparịta ụka na Mgbanwe Red Hat nke CentOS Stable Platform n'ime Nkesa Ule Na-aga n'ihu nke "CentOS Stream" kwuputara ebumnuche ya iji mepụta ohuru nke RHEL ma kpọọ ndị mmepe ndị ọzọ ka ha sonyere ndị ọrụ a.
Ana m eche echiche ịmepụta ọzọ nke RHEL ma nwedịrị ike ịkpọ mmadụ ole na ole maka mbọ a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnyere aka, sonyere HPCng slack (jikọta ya na webụsaịtị hpcng.org).
(onye bidoro CentOS)
Iji mepụta mmepe nke nkesa ọhụrụ, Gregory debara aha ngalaba rockylinux.org ma mepụta nchekwa na GitHub.
Oru ngo a ka no n’usoro nhazi na nguzobe otu ndi mmepe. A na-azọrọ na Rocky Linux ga-aga n'ihu na ọdịnala nke CentOS a ma ama na ndị agha obodo ga-emepe ya.
Ihe oru ngo a gha eweputa ya ohuru nke Red Hat Enterprise Linux nke n'egosiputa onodu nke ntughari nke RHEL ma adabara maka oru mmeputa ya na ulo oru. Iji kwado oru ngo a, akụrụngwa nke ụlọ ọrụ Control Command, nke Gregory duziri.
N'ikpeazụ sm chọrọ ịmatakwu banyere ya, I nwere ike ịgbaso eri nke mkparịta ụka na njikọ na-esonụ.
Mgbe ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụ banyere mmepe nke nkesa ọhụrụ, ị nwere ike ịga gị na ebe nrụọrụ weebụ gị o nchekwa nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » A tọhapụrụ CentOS 8.3 na onye guzobere CentOS amalitela mmepe nke Rocky Linux
Cloud Linux ga-ndụdụ, ọ ga-abụ na ọ ga-ahụ ọkụ tupu linux ọkaibe.
Regolith: Ebe obibi Desktọpụ nke oge a ma rụọ ọrụ dabere na i3wm
Radicle, usoro ikpo okwu mmepe